Ururka Suxufiyiinyta RSF oo cambaareeyey xarig loo geystay Suxufiyiin ka hawlgala Muqdisho. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Ururka Suxufiyiinyta RSF oo cambaareeyey xarig loo geystay Suxufiyiin ka hawlgala Muqdisho.
Qoraal ka soo baxay Ururka Suxufiyiinta aan Xuduudka Lahayn ee Reporters Without Borders “RSF” ayaa lagu tilmaamay inuu Isbuucii hore u ahaa Suxufiyiinta Soomaaliyeed waxa loogu yeeray Toddobaadkii Madoobaa ee Saxaafadda Somalia.
Ururka Suxufiyiinta ee RSF oo uu Fadhigooda Dhexe ku yaallo caasimadda dalka Faransiiska ee Paris waxay sheegeen in Toddobaadkii hore 3 Saxafi lagu xiray magaalladda Muqdisho, isla markaana Suxufiyiinta Soomaaliyeed ee ka qeyb galay Shirweynihii Wada-Tashiga Qaranka laga wada masaxay dhamaan codadkii iyo muuqaaladii ay ka soo duubeen Shirkaasi, waa sida ay sheegtay Hay’adda RSF.
Warbixinta RSF waxaa kaloo lagu sheegay in magaalladda Muqdisho lagu xiray 3 Weriye oo lagu kala magacaabo:- Abuubakar Maxamed Cali oo ka tirsan Idaacadda Star FM, Axmed Cumar Axmed oo ka tirsan Radio Shabelle iyo C/risaaq Cumar Axmed oo ah Saxafi Madax Bannaan.
Ururka Suxufiyiinta aan Xuduudka Lahayn ee RSF waxay intaasi ku dartay in 2 Weriye la sii daayey, halka uu weli xiran yahay C/risaaq Cumar Axmed, kaasi oo aan weli la soo taagin Garsoorka.
Dhinaca kale, Madaxa Ururka RSF ee ugu qaabilsan Qaaradda Afrika, Cléa Kahn-Sriber ayaa ugu baaqday Madaxda Dowladda Somalia inay xushmeeyaan Xorriyadda Warbaahinta oo uu Dastuurka Qaranka damaanad qaaday, isla markaana la joojiyo Tacadiyadda loo geysanayo Suxufiyiinta.
Si kastaba ha ahaatee, dalkeenna Somalia waxa uu sannadkan Kaalinta 172-aad ka galay Qiimeynta Caalamiga ee Dhowrista Xuquuqda Suxufiyiinta, sida lagu soo bandhigay Qiimeyn Sannadeedka Ururka Suxufiyiinta aan Xuduudka Lahayn ee Reporters Without Borders “RSF”.
Ciiddanka Badda ee Libya oo soo badbaadiyey In ka badan boqol Tahriibayaal.